ịgbado ọkụ rotator - China Langzhi ịgbado ọkụ Equipment
ịgbado ọkụ rotator ịgbado ọkụ rotator bụ osote ngwá maka ịgbado ọkụ ojiji. Iji nweta nri ọnọdụ via tilting na revolving.Uesd na manipulator na welder, dị ka akpaka ịgbado ọkụ center ma ọ bụ dị ka workpiece rotator mgbe ntuziaka welding.We ịmụta VFD dị ka ọsọ akara nke nwere nnukwu accurancy .control igbe nwere ike ịbụ iru lekwasịrị nke ogologo anya ma ọ bụ linkage ọrụ mgbe interface na manipulator na welder. Ịgbado ọkụ rotator mejupụtara tilt na ngwaọrụ na dabeere device.To nweta chọrọ ịgbado ọkụ ma ọ bụ a ...
Ịgbado ọkụ rotator bụ osote ngwá maka ịgbado ọkụ ojiji. Iji nweta nri ọnọdụ via tilting na revolving.Uesd na manipulator na welder, dị ka akpaka ịgbado ọkụ center ma ọ bụ dị ka workpiece rotator mgbe ntuziaka welding.We ịmụta VFD dị ka ọsọ akara nke nwere nnukwu accurancy .control igbe nwere ike ịbụ iru lekwasịrị nke ogologo anya ma ọ bụ linkage ọrụ mgbe interface na manipulator na welder.
Ịgbado ọkụ rotator mejupụtara tilt na ngwaọrụ na dabeere device.To nweta chọrọ ịgbado ọkụ ma ọ bụ assemblying n'akuku via n'elu ikpo okwu na-ebuli. Platform njikwa ọsọ bụ VFD nke na-eduga a afọ ojuju ịgbado ọkụ speed.Customize dị dị ka gị chọrọ.
Previous: ịgbado ọkụ mbịne ala
Osote: ejikọ igwe
Langzhi ịgbado ọkụ